Rudzi: Style, Image
Nzira yekubvisa pende kubva kune jeans: nhanho nedanho mirayiridzo
Vakashatisa mabhurugwa avo avanoda mupendi, vazhinji vanokanganisa vanotenda kuti unogona kuzvirasa zvakachengeteka. Vanonyanya kushushikana vanosarudza kugadzira zvikabudura kubva kwavari, kana kukwirira kwenzvimbo kuchibvumira. Asi, nditende, izvi zvakare ...
Ballroom shangu dzevana nevakuru: saizi, kusarudza
Kukosha kwekusarudza chaiyo shangu dzekutamba hakugone kuwedzeredzwa. Vanhu vanotamba zvinehunyanzvi vanonzwisisa izvi chaizvo. Kuti vakunde kugona, ivo vanofanirwa kushandisa yakakosha chikamu chenguva yavo mukudzidziswa. Uye kana kukwana ...
Shati yebhuruu yevakadzi - chinhu chakakosha chewadhiropu chinhu
Zvinoshamisa, asi vakadzi vanotaridzika chaizvo uye vanoyevedza mune zvipfeko zvevarume. Ehe, isu hatisi kutaura nezve zvese zvinhu zvewadhiropu yevakomana kana vasikana, asi tuxedo yemuviri wakashama kana iyo ...
Lolita maitiro: tsananguro, zvipfeko
Iyo Lolita maitiro ndeye yekutanga kugadzirwa kwema 70s anga achizivikanwa kwemakumi akati wandei emakore. Japan inoonekwa sekuzvarwa kweiyi fashoni maitiro, ayo atora mamwe maficha eRococo neBaroque, uye kune rimwe zita ...
Chii chinonzi goridhe rakachena? Zvivakwa, kuumbwa, muyedzo uye mutengo pa gramu yegoridhe yakachena
Vanhu vagara vachida kushongedza miviri yavo nezvinhu zvakasiyana siyana. Kana makore mazhinji apfuura, mabheji, ngetani, zvishongo, mhete nemhete zvaipfekwa zvakanyanya semazango ezvechitendero uye mazango, saka ...
Blouse-bodysuit "Inofadza silhouette" ("Avon") - wongororo yevatengi nevaya vanopfeka blouse iri
Bhurauzi renguva dzose harikodzere zvakanaka mujean, mudhebhe, kana siketi. "Mabhuru" anoonekwa pachiuno, izvo zvakaoma kubata nazvo, nekuti iwe unofanirwa kuzvitarisa nguva dzese. Tenzikadzi weblouse rakadaro anotya uye anogara ...
Unisex - chii icho? Unisex maitiro anoonekwa sei mune zvipfeko, zvinonhuwira kana shangu?
Kune akawanda mazano akasiyana munyika yanhasi; mamwe anonyangarika seasina basa, mamwe anomuka. Ichi chinyorwa chichava chinobatsira kune avo vanoda kunzwisisa izwi rakadai seunisex: chii icho uye ...
Anorak Nike ichagara iri fashoni maitiro
Mune fashoni, zvinhu zvemitambo zvinowanzo gara munzvimbo dzekutanga. Mabhachi emwenje kana mabhureki emhepo anga ari munzvimbo dzakanakisa munzvimbo iyi kweanoverengeka makore. Iyo Nike anorak yakapinda imomo nekukurumidza uye nekukurumidza ...
Tsitsi (bvudzi rebvudzi reVenus). Mufananidzo, zvivakwa uye kukosha
Rimwe rematombo anozivikanwa seni-anokosha iquartz. Kuzivikanwa kwaro kunokonzerwa neayo aesthetics uye pane yakaderera mutengo wemaminerari. Imwe yemhando dzinonakidza dzequartz ine mvere, ibwe rine zita renhetembo rebvudzi ...
Maitiro Ekuvanzika: Maitiro Ekupfeka Beret
Izwi rekuti "beret" haribatanidzwe nechisimba nemufananidzo wevakadzi vakanaka veFrance vane ngowani yakanakisa pabvudzi ravo. Mune fashoni yemazuva ano, iko kuiswa kwechimiro cheParis, mucherechedzo wechikadzi uye kugona. Uye kana vakadzi veFrance vari mu ...
Ndeipi refu uye ihembe yekupfeka nayo?
Avo vasingazive kuti ruoko rurefu chii vakarasa zvakawanda. Mushure mezvose, chinhu ichi ndechimwe chezvakanakisa. Iyi T-shati-refu-maoko-akagadzirwa akanaka kwazvo uye akapfava ...
Rose mune fashoni - maitiro matsva Forever-rose
Maruva ndicho chinhu chekutanga chinouya mupfungwa kana murume achitsvaga kukunda mukadzi. Chiratidzo cherudo, rwekunyepedzera, rudo runopisa uye kushuvira, ndizvo zvinosimbisa manzwiro uye chimiro chechishuwo chekufadza. Rose mu ...
"Balenciaga" (pefiyumu): tsananguro yemunhuwi, mugadziri uye ongororo
Balenciaga ipefiyumu iyo yaimbove yega sosi yemari yeiyo fashoni imba yezita rimwe chete. Cristobal Balenciaga aive neacouturier ane tarenda aigadzira mbatya dzakanaka uye zvinhu zvinoonekera. Masaga echiratidzo ichi anozivikanwa ...
Ko khaki mune hembe dzinoenda nepi?
Munguva pfupi yapfuura, iyo "yemauto" maitiro, ayo akasimba akabatana neiyo khaki color scheme, yadzokera kumafashoni zvakare. Iko kukanganisa kufunga kuti iwo anonzi "mauto" mavara akakodzera chete kune hunhu uye hwakajeka vakadzi vadiki. Nekuti…
Isu tinosarudza kwekutenga pasi jekete muYekaterinburg
Izvo zvakaringana kutenga pasi bhachi kamwe chete kwechando, sezvo iwe unova anonamira erudzi urwu rwembatya. Vanhu vokuRussia vakawira murudo neaya anodziya akadzikamisa vanunuri kubva kune kwakanyanya kutonhora mamiriro ekunze nekuda kwekureruka kwavo uye kwakanakisa kwekushisa kwekuisa hunhu. Pasi majaketi kwenguva refu ...
Candice Swanepoel: parameter yechiumbwa, izvo zvakavanzika zvekugadzira uye hupenyu hwega hwemuenzaniso (foto)
Nyika yemafashoni indasitiri yemabhiriyoni emadhora zuva rega rega. Kupfura kwemagazini, kuratidza kuunganidzwa kutsva, kuvandudza mafambiro matsva, kutsvaga vafotori uye mamwe matambudziko akawanda anonetsa vagadziri, vagadziri vefashoni, vapepeti ...
Ndeipi kambani yekutenga zvipfeko zvechando kune mota yechando? Chando chechando Nguva yechando: Brand rating
Munguva pfupi yapfuura, zvave zvemafashoni chaizvo kushandisa nguva yavo yekuzorora yechando kunze kwemusha. Kana pakutanga vagari venyika yedu vaida imba inodziya mukutonhora kwechando, ikozvino gore rega ...
Fekitori yefuru "Kalyaev": wongororo yezvigadzirwa
Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti fashoni iri mukadzi ane hunhu hunoshanduka, akanaka majasi echisikigo ehembe anogara achive chiratidzo chewadhiropu yevakadzi. Hazvibviri kufungidzira chipfeko chakakwana, icho chinodziya uye nemanzwiro ako ...
Kupfeka kwemajasi evarume evarume?
Nekusvika kwekutonhora kwemamiriro ekunze, kudiwa kweyekunze, inodziya yekunze zvipfeko inonzwika sekusati kwamboitika. Sarudzo yakanakisa yevakadzi nevarume jasi. Chinhu chewadhiropu chakasarudzika kwenguva refu ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,457 masekondi.